QuickLook inotakura mavitamini mune itsva macOS Mojave | Ndinobva mac
Kana paine chinhu chimwe chete chinoshandiswa mazuva ese muhurongwa hwekushanda hweApple makomputa, ndiyo inoshandiswa neKurumidzaLook, iyo yatinogona kuona nekukurumidza Kuona kwekutanga usinga fanirwe kuvhura zvizere faira nekungosarudza iyo faira wobva wadzvanya iyo space bar pane iyo keyboard.
Izvi zvave zvirizvo kwemakore mazhinji uye mazhinji mavhezheni e macOS, asi nekuuya kweMacOS Mojave kunouya kunatsiridzwa kunovandudzika avo vanopa kukosha kukuru kune ichi chinoshandiswa mumabasa ezuva nezuva.
Patinoita QuickLook yeimwe faira, kana iri pikicha inotibvumira kuti tione, kana iri pdf faira inotibvumira kuti tione thumbnail yemapeji uye kunyange kuenda kubva kune rimwe peji kuenda kune rimwe uye tichiona zviri mukati faira. Mune itsva MacOS Mojave zvese zvinoshanduka kuita zvirinani uye ndezvekuti dzakawanda dzesarudzo dzatinadzo muChiratidzo chekutanga chakawedzerwa kuwindo reKurumidza.
Iyo QuickLook chishandiso paMac yawana simba rakanyanya neMacOS Mojave. Iye zvino unogona kusaina mafaera ePDF, trim mavhidhiyo pasina kuvhura zvizere, uye gadzira zvakatwasuka kubva pane yekutarisa pane iyo inowoneka kana iwe uchidzvanya iyo space bar.
Kuti ushandise iri basa, iwe uchafanirwa kungodzvanya bhawa repakati pamwe nefaira rakasarudzwa muKutsvaga kuti uvhure QuickLook, sezvaunowanzoita. Iwe uchaona nyowani yekuita icon pane yekushandisa. Dzvanya pairi uye iwe uchaona zviito zvaunogona kutora kugadzirisa gwaro.
Semuenzaniso, kana uchishanda negwaro rePDF, iwe uchaona Preview's PDF markup maturusi. Unogona kudhirowa, kunyora uye kuisa siginecha yako chero kupi. Paunenge uchishanda nevhidhiyo, iwe uchaona QuickTime yekugadzirisa zviitiko senge vhidhiyo yekucheka chishandiso. Iwe unogona kukurumidza kudzora vhidhiyo uye utore chete mabiti aunoda pasina kuvhura vhidhiyo mupepeti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » MacOS Mojave » QuickLook ine mavitamini mune iyo nyowani macOS Mojave
Yazvino yekuvandudza (macOS Catalina) yakawedzera izvo nema cbr mafaera. Ini ndaigona kugara ndichishandisa kuti nditarise ma comics uye ikozvino chete iyo folda icon ine zipi ndiyo inobuda. Chii chakashata.
Kwete kunyange nemamwe mavhidhiyo mafaera, senge avi
iOS uye macOS zvichave padyo asi hazvizobatanidzwa